‘एकता सुनिने मात्र होइन देखिनु पर्छ’ — News of The World
हस्त वहादुर साही
उपाध्यक्ष,एवं कर्णाली संयोजक,युवा संघ नेपाल
पार्टी एकतापछि जनसंगठनहरुमा कस्तो उत्साह श्रृजना भएको छ ?
जुन पार्टीका नीति, विचार र कार्यक्रमहरु मिल्छन, उनीहरु बिचको एकता स्वाभाविक मानिन्छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र विचको एकता पनि यहि प्रक्रियाको यात्रा हो । दुइ ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकताले जनसंगठनमा मात्रै होइन, सिंगो जनजीवन मै ठूलो प्रभाव पारेको बुझन् सकिन्छ । आम श्रमजीवि र सीमान्तकृत समुदायमा समेत व्यापक उत्साह श्रृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा आम युवाहरुमा सुखद सन्चार नहुने भन्ने त सवालै रहेन ।
तर पार्टी एकताले त नेतृत्व विकासका ठप्प भयो भन्ने आवाज सुनिदै छ नि ?
त्यस्तो होइन, पार्टी एकताले नेतृत्व विकासका सम्भावनाका ढोका झन धेरै खोलीदिएको छ । अहिले पार्टीका अधिवेशन स्थगीत भएको, स्थानीय पार्टी कमीटी भङ्ग भएका कारण कतै पार्टीको गती धिमा भएको हो की भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । तर अब छिट्टै अहिलेको सुस्तता सीतलतामा होइन आद्रतामा परिवर्तन हुने पक्का छ । हामी सरकार र पार्टीका जनपक्षिय कार्यलाई लिएर आक्रामक रुपमा जनतासामु जाने तयारीमा छौ ।
पार्टी कमीटीहरु भङ्ग हुँदा काम गर्न कत्तिको गाह्रो परेको छ ?
कमीटी भनेका पार्टीका जीवन अङ्ग हुन तिनीहरुको अभावमा पार्टी चल्न सक्दैन । तर अहिले संक्रमणकाल भएकाले केहि समयका लागी कमिटी स्थगीत जस्ता छन् । विधानत कमिटी विघटित भए पनि जनताको माझमा तिनै कमीटीका साथीहरुले पार्टीलाइ जनतासँग जोडीरहनु भएको छ ।
पार्टी कार्यालयमा त ताला ठोकीएको देखिन्छ त ?
हो, तपाइले भनेको आंसीक सत्य हो, पार्टी कार्यालयमा पहिला जस्तो भीडभाड हुदैन । नेतृत्व जनतासम्म पुगेको कारणले पार्टी कार्यालय सम्म जनता नआएका हुन । अधिकांस स्थानीय तह,प्रदेश र संघ सबैतिर जनताको प्रतिनिधिको रुपमा पार्टीका नेता कार्याकर्ताहरु चुनिएका छन् । यसकारण पार्टी कार्यालयका काम केहि हदसम्म बाहिरबाट भएका छन् ।
तर, संगठनले अझै सम्म मुर्तता त पाएनन् नी ?
यो साचो हो, पार्टी संगठन मुर्त बनिसकेको छैन । भर्खर सरकार गठन र त्यसपछि वर्षा प्रारम्भ भएकाले काम हुन नसकेका हुन । केन्द्रमा विभिन्न कार्यदलले अहोरात्र काम गरेका छन । छिट्टै पार्टी र जनसंगठनका सबै कमीटी मुर्त बन्ने छन र संगठनले मुर्तता प्राप्त गर्नेछ ।
कार्यकर्ताहरुले अन्यत्र अवसर खोज्न थालेको जस्तो देखीन्छ नि ?
कम्युनिष्ट पार्टीका कार्याकर्ता कुनै न कुनै कमीटीमा आवद्ध र सक्रिय नभइरहन सक्तैनन् । पछिल्लो समय कमिटी भंग भएकोले अन्यत्र सक्रियता देखाउनु स्वभाविक हो । जव कमीटी फर्मेसन हुन्छन् तब कार्यकर्ता पार्टीमै फर्किएर सक्रिय हुन्छन् ।
कार्याकर्ताको माग के हो ?
शोषणविहिन समाज निर्माणको लागी जीवन अर्पिएका कार्यकर्ताको ठूला सपना छैनन् । कार्यकर्ता त छिटो भन्दा छिटो पार्टीलाइ कमीटी पद्दतिमा लैजान्छ भन्छन् । उनीहरुको एउटै माग हो छिटो हामीलाइ काम देउ ।
तर, एकतापछि त कार्यकर्तामा झन निरास देखिएको छ त ?
पटक्कै होइन, आमउत्साह छ । खाली एउटै कुरा के हो भने, एकता नेताका विचमा होइन, कमिटीका वीचमा हुनुपर्छ भन्ने आग्रह मात्रै कार्यकर्ताको हो । आम कार्यकर्ता सुनिने भन्दा पनि देखीने एकताको पक्षमा छन् ।